Eebbisaa Addunyaa – OROMP4 Studio
Dabaree-Seenaa Ummata Oromoo
seenaa gootota oromoo durii
26th March 2016 26th March 2016 Gadaa Hunde	Comment is Closed
Eebbisaa Addunyaa weellisaa beekkamaa fi qabsaawa mirga Oromoo ti. Kan inni ittiin beekkamu keessaa tokko walleesaa kan gootummaa faarsuu fi deeggarsa olaanaa ABOf, dhaabbata Oromoon hiree isaa ofiin akka murteeffatuuf qabsaawu, qabuuni. Eebbisaan Humna Poolisii Federaalatiin gaafa Hagayya 27, 1996tti manaasaa isa Finfinnee jiru keessatti ajjeefame.
Ebbisaan kan dhalate naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa magaalaa Dambi Doollookeessatti. Eebbisaan maatiisaaf ilma angafa yoo ta’u obboleeyyan dhiiraa 2 fi durbaa 3 qaba. Eebbisaan nama kennaa qabuu fi dargaggeessa kabajamaa ture. Barumsaa sadarkaa 1ffaa Mana Barumsaa Oliiqaa Dingilitti kan barate yoo ta’u, barumsa sadarkaa 2ffaa ammooMana Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Qeellamitti barate. Eebbisaan qormaata biyyoolessaa fudhatee waan darbeef yuunivarsiitii galee barachuuf qophaa’aa ture.
Bara 1991, odoo Eebbisaan ramaddii yuunivarsiitii eeggachaa jiruu, humnoonni ABO, ABUT(TPLF), fi ADWUI(EPLF) mootummaa Dargii kuffisan. Magaalaa Eebbisaan keessa jiraatu Dambi Doolloo keessatti, ABOn buufata waraana guddaa dhaabe. Yeroo sana, Eebbisaan haalli jireenya ummata Oromoo garbrummaa ta’uusaa waan hubateef akkasumas barbaachisummaa Oromoon hireesaa ofiif murteeffachuuf qabu waan itti amaneef, kanaaf qabsaawuuf jecha dhaqee ABOtti makame. Eebbisaan jalqaaba akka daballeetti kan leenji’e yoo ta’u dandeettii addaa waan agarsiiseef, buufata ABO kan Dambi Doolloo keessatti leenjisaa dabballootaa ta’ee muudame. Dandeettii waraanaa qofa odoo hin taane, Eebbisaan dandeettii sirbaas ni qaba ture; kennaa sagalee isa qabu bukkeetti meeshaalee muuziqaa baayyees ni tabata. Sababa kanaaf, Eebbisaan hawwisoo ABOtti makamee aadaa, wallee, fi eenyummaa Oromoo mullisuurratti ga’ee guddaa tabate.
Bara 1991 fi 1992 guutummaassa, Eebbisaan Oromiyaa keessa naannoo adda addaa (kibba, kibba lixaa, giddu galeessa, dhiha) deemee weellisaa ture; sirboonni isaa sirba aadaa yoo ta’an ergaansaanii garuu kan warraaqsa (revolution) kakaasan turani. Eebbisaan, sirboota isaatin hacuuccaa ummata Oromoorra ga’u ifatti baasee kan ibsu yoo ta’u karaa ittiinOromoon mirga isaa gaafatuu fi falmatus ni ibsa.
Akka nama dhuunfaatti, Eebbisaan nama gara laafessa ture; ummata Oromoo garaa guutudhaan jaalata ture, baayyee dimmaafis ture. Eebbisaan namoota gargaaruu fi dhimmuufiif nama duubatti hin jenne ture; obboloota isaa, firootasaa, ollaasaa, namoota gargaarsa barbaadan kamiyyuu ni gargaara ture. Eebbisaan artisitii baayyee jaalatamaa, dinqisiifamaa, fi saboonaa dha. Eebbisaan jalqabaa qabee gootummaadhaan beekkama. Erga ABOn biyyaa ba’ee geggeessitoonni isaa biyyaa baqataanii ABO dhoksaadhaan socho’uu jalqabee boodalle, Eebbisa sirba isaatin hammenya mootummaan Itoophiyaa ummatarraan ga’u ibsuu hin dhiifne. Eebbisaan baayyee ija jabeessa, kan hin sodaanne fi ifatti hojii shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoorraanga’u balaaleffachuurraa duubatti jedhee hin beeku. Deeggarsa WBOtif qabus amma dhumaatti ittuma fufe.
Sababa Eebbisaan ija jabeessa ta’eefi ifaan ifatti ajjeechaa fi sarbama mirgaa mootummaan Itoophiyaa raawwatu balaaleffatuuf, ofuma isaayyuu ilaalcha mootummaa keessa akka galu godhe. Akka Oromia Support Group Press Release No 17 jedhutti, nama umurii 26 kan ta’e hiriyaan Eebbisaa mootummaan akka isaan hordofaa fi too’achaa(surveillance) akka jiru bare; Eebbisa iddoowwan waltajii adda addaatti konkolaatadhaan kan geessu isa ture. Gaafa Hagayya 30, 1996 Eebbisaa Addnuyaa ergamtuu mootummaa Itoophiyaatinmanasaa keessatti Finfinneetti ajjeefame.
Akka gabaasa Oromia Support Group Press Release No 14 kan Onkoloolessa 1996tti: weellisaa sabboonaa Oromoo Eebbisaa Adduynaa fi hiriyaansaa Xanna Wayyeessa ergamtuu humna nageenyaa mootummaa Itoophiyaatin gaafa Hagayya 30, 1996tti ajjaeefame. Yeroo namoonni meeshaa waraanaa hidhatan manasaa cabsanii seenan Eebbisaan manasaa kan naannoo Shiroomeedaa lakk 094, Olaanaa 13, Ganda 01 jiru keessa jira ture. Mannisaa kun kaaba Imbaasii Ameerikaa kan Finfinneettiargama.
Namoonni ijaan argan akka jedhanitti, reeffi mana keessaa harkifamee konkolaataa Laandi Rooverii kan lakkoofsa eeyyamaa mootummaa qabutti (government license plate) fe’ame. Ergamtoonni mootummaa warri isa ajjeesan jalqaba namoonni karaarraa akka sokkan godhan. Namoonni dhukaasa qawwee dhaga’anii manaa gadi bahanii ilaalan gara manaatti akka ol deebi’an ajajaman. Reeffi isaanii guyyaa itti aanuu hospitaala Minilik kutaa reeffaa keessaa argame. Erga Eebbisaan ajjeefamee maatin Eebbisaa rukkuttaa mootummaa keessa galan; ergamtoota DhDUO kan Dambi Doollotiin hacuuccaa fi miidhaa baayyetu isaanirra ga’e. Obboleessisaa Ashannaafiin ergamtoota Wayyaanee fi DhDUOtin si’a baayyee hidhamee.
Generaal Taaddasaa Birruu
© OROMP4 Studio